Vidim-bary : tafakatra 2.100 Ar ny kilaon’ny « stock » | NewsMada
Vidim-bary : tafakatra 2.100 Ar ny kilaon’ny « stock »
Tsy tanteraka mihitsy ny fampidinana ny vidim-bary araka ny baikon’ny filohampirenena tany Mahajanga, ny volana marsa teo. Midangana, mihoatra ny 2.000 Ar koa ny vary afarana avy any ivelany.
Tsy mety mihena ny vidim-bary na manomboka miakatra aza ny vokatra avy any amin’ny faritra sasany. Anisan’ny lafo indrindra eto an-dRenivohitra ny vary makalioka, sady vitsy ny mpivarotra sahy mivarotra azy, mahatratra 2.200 Ar hatramin’ny 2.500 Ar ny kilao. Manodidina ny 2.000-2.200 Ar/kg ny vary gasy ary 1.800-2.000 Ar/kg ny vary fotsy hafa avy eto an-toerana.
Any Ambatondrazaka, fototry ny makalioka, efa mahatratra 1.960 Ar ny kilao (560 Ar/kapoaka) raha toa ka 1.575 Ar/kg (450 Ar/kapoaka), ny volana febroary sy marsa teo.
Ny mahavariana amin’ity vidim-bary ity, nisondrotra manaraka ny vidin’ny eto an-toerana koa ny afarana avy any ivelany sady lafo. Mahatratra 2.100 Ar ny kilaon’ny vary “stock”, sokajian’ny mpivarotra ho vary tsara (riz de luxe), na tsy fantatra mazava aza ny fahamarinany.
Mitobaka ny vary
Dikany, tsy nampidina sady tsy nandrindra ny vidim-bary ny fanafarana avy any ivelany. Antony, tsy foana ny tahiry sy ny karazam-bary amidy eny an-tsena satria maro ny karazam-bary avy eto an-toerana (makalioka, vary gasy mena, tsipala, botra, dista, …) saingy samy lafo tsy takatry ny ankamaroan’ny mpanjifa avokoa. Tsy tena mitombona araka izany ny fifandanjan’ny tolotra sy ny tinady tokony mamaritra ny vidin-javatra.
Ifanilihan’ireo mpiantsehatra amin’ny fihariana vary rahateo ny tena tompon’antoka amin’ny halafosan’ny vidim-bary, ankoatry ny mpamboly. Miainga any amin’ny mpanangom-bokatra, ny mpitatitra, ny mpamongady ary ny mpaninjara. Manoloana ireo, mionona amin’ny fitsikerana tsy manana sy tsy mandroso vahaolana ny fikambanan’ny zon’ny mpanjifa, sady tsy henoin’ny tompon’andraiki-panjakana rahateo.